Media sy Fanoratan-gazety · Aogositra, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Aogositra, 2016
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Aogositra, 2016
Avelan'ny Fitantavanan'ny Snapchat Mitantara Amin'ny Fomba Miafina Ny Nahazo Azy Ireo Lasibatry Ny Herisetra Ara-nofo Ao India
Azia Atsimo 31 Aogositra 2016
"Midera ilay tonian-dahatsoratra amin'ny finday ao amin'ny HT (Hindustan Times), Yusuf Omar noho ny fanovana zava-baovao tsy dia zava-dehibe ho fitaovana mahery vaika.."
Naato Tao Anatin'ny Fifidianana Mampiadi-hevitra Ny Fahilavitra Tsy Miankina Iray sy Radion'ny Fiarahamonina Iray Ao Zambia
Afrika Mainty 27 Aogositra 2016
"Manjary miha lasa efi-pitsarana miandalana i Zambia. Tokony ho mailo avokoa isika rehetra rehefa miteny momba ny olan'ny tombontsoam-pirenena."
Asehon'Ireto Lahatsary Ireto ny Fahalotoana sy ny Faharavana Ateraky ny Fitrandrahana Goavana ny Harena An-kibon'ny Tany ao Filipina
Azia Atsinanana 26 Aogositra 2016
Mampiasa finday ary tonga hatramin'ny fampiasana tantelimby (drone) ireo mpanangom-baovao sy mpanao gazety fanadihadiana hampisehoana ny fandravana ateraky ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ireo riandrano sy ony ao amin'ny firenena.
Azia Atsinanana 25 Aogositra 2016
Fihantsiana Ireo Mpanao Sivana Tranonkala : ‘Manompo’ Sahobakaka Ny Shinoa Ho Fanamarihana Ny Faha-90-Taona Nahaterahan'ny Mpitondra Fanjakana Teo Aloha
Azia Atsinanana 21 Aogositra 2016
Raha voateritery ny vanim-potoanan'ny sahobakaka , dia hita fa tsara kokoa noho ny vanim-potoanan'i Bun [midika hoe an'i Xi ] izany. Mitovy amin'ny gadra ao amin'ny maizina, tsy mahazo fakan-drivotra fohy ivelan'ny trano ireo vahoaka Shinoa nanompo ny sahobakaka raha amin'izay fomba fijery izay
Amerika Avaratra 21 Aogositra 2016
Mientanentana Momba Ireo Atletany Ny Jamaikana ary Somary Mitebiteby Kely Momba ny ao Rio
Karaiba 19 Aogositra 2016
Nahoana ireo firenena lazaina fa mandroso no tsy mitsahatra mankahala an'i Brezila ary mba hamela anay hankafy ny Olaimpika? Fahatsaran'Andriamanitra!
Manontany Ny Doka Antoko Komonista Shinoa Hoe: ‘Iza Moa Aho?’ Mamaly Ny Media Sosialy Hoe: ‘Mpanao Kolikoly.’
Azia Atsinanana 18 Aogositra 2016
"Izaho no nasandratra, Izaho no manana tombontsoa, Izaho no olona tsy voasongonao mandrakizay, satria tsy afaka manongana ny antoko na oviana na oviana ianao."